Shirkadaha oo loo ogolaaday in ay mamnuucaan xijaabka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 14 mars kl 10.34
Khadra:"Hadii albaab kaa xidhmo mid kale ayaad furan kartaa"
Xukunkan ayaa ka yimid maxkamada EU. sawir: Johansen, Carina
Khadra Seerar ayaa u jeeda in ay saameeyn doonto diinta muslimka ah madama dushooda laga arko in ay xijaabanyihiin halka diimaha kale sida ta yuhuuda la qaato silis aan muqanin. Balse fikirkeedu muxuu ka yahay go´aanka maxkamadeed?
-Aniga waxeey ila tahay in shirkad kasta xor u leedahay in ay go´aamiso si ay shaqaalahoodu u labistaan, dhanka kale xukunkani wuxuu si xun u saameeynayaa hablaha xijaabaan. Hadii shirkadu kuu diido in aad halkaas ka shaqeeysid waxaan odhan lahaa shirkad kale shaqo u doono. Marka uu albaab ka xidhmo mid kale ayaa kuu furmaya.